सांसद पद खोसिएका चार मन्त्रीको मन्त्री पद के हुन्छ ? - Rising Dainik
सांसद पद खोसिएका चार मन्त्रीको मन्त्री पद के हुन्छ ?
April 8, 2021 April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on सांसद पद खोसिएका चार मन्त्रीको मन्त्री पद के हुन्छ ?
काठमाडौँ- बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले पार्टीबाट का’रबाहीमा परेका चार सांसदलाई पद मुक्त गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेजीको फै’सला सुनाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएसँगै नेपाली राजनीतिमा एउटा छुट्टै अध्याएको सुरुआत भएको थियो ।
त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरु नेकपा एमालेतर्फ नै लागे । उनीहरू केहीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पद जोगाए भने केहीलाई मन्त्री बनाए ।
अहिले उनीहरूको सांसद पद नै गएको छ । माओवादी छाडेर एमालेतर्फ लागेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको पद गएको हो ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर उनीहरूले दल त्या’ग गरेको जानकारी गराइसकेका छन् ।
सोही जानकारीको आधारमा प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा का’रबाहीमा परेका चार सांसद पद मुक्त भएको जानकारी गराएको हो ।
गत सोमबार संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसद् सचिवालयलाई चार जना सांसदलाई का’रबाही गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूलाई पुन नियुक्ति नगरे मन्त्री पद पनि जानेछ । सभामुखले माओवादी केन्द्रले पठाएको पत्र अनुसार उनीहरूले दल त्या’ग गरेको सूचना सुनाएर पढेर सुनाएका थिए ।
मन्त्री पद के हुन्छ ?
सांसद पद गएसँगै उनीहरुको मन्त्री पदसमेत समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई पुनर्नियुक्ति नदिए उनीहरु मन्त्री पदमा रहने छैनन् ।
पुनर्नियुक्ति भएमा बढीमा ६ महिनासम्म उनीहरुले मन्त्री पदमा बस्न पाउनेछन् । त्यस अवधिमै उनीहरु सांसद भएमा मन्त्री पदमा निरन्तरता पाउन सक्नेछन् ।
प्रचण्डलाई नसोचेको धक्का , देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट खुट्टा झिके !
यसरी हुदै छ एमाले र माओवादीको पुनर्जन्म, फागुन २० पछि लाग्ने भए आ-आफ्नो बाटो !
नारायणकाजीलाई कमानसिंहसँग जोडेर अनावश्यक प्रचार नगरौं : प्रचण्ड
निर्मला र भागरथीका ह’त्यारालाई पानीमुनि गए पनि छाड्दैनौं : प्रधानमन्त्री ओली
February 13, 2021 February 13, 2021 Ramash Kunwar